ယူနိုက်တတ်ရဲ့ စီနီယာကစားသမားတွေဆီ အီးမေးလ်ပို့ပြီး တန်းဟတ် သတိပေး – Myanmar Sports United
မန်ယူနည်းပြသစ်တန်းဟတ်ဟာ ကစားသမားတွေဆီကနေ သူ ဘာတွေမျှော်လင့်ထားတယ်၊ သူ လိုချင်တဲ့အသင်းပုံစံနဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး အသိပေးလိုက်တယ်လို့ The Sun သတင်းစာက ဖေါ်ပြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အေဂျက်ဇ်နည်းပြဟောင်းဟာ
ဖာဂူဆန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်း မှန်ကန်မှုမရှိတော့တဲ့အသင်းယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲချင်နေတာပါ။ “ ဘောလုံးဆိုတာ အသင်းလိုက်ကစားနည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်သူကမှ တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုအရေးမကြီးကြောင်းကို နည်းပြသစ်က
ပထမအသင်းသားတွေဆီ အီးမေးလ်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကြယ်ပွင့်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် သူ့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကတော့ တစ်သင်းလုံးအပေါ်မှာပါ။လေ့ကျင့်ရေးတိုင်း ပွဲတစ်ပွဲလိုဖြစ်အောင် ကစားသမားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်စေချင်နေတယ်။ ကစားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကို ရစေလိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောထားတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ သူတို့ တံခါးအပြင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သူတို့ကြိုးစားကြရလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ မလုပ်နိုင်ရင် တန်းဟတ်ဟာ အလားအလာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ အစားထိုးလိမ့်မယ် ” လို့ မန်ယူနဲ့နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝန်းက ပြောဆိုထားကြောင်း
The Sun က ရေးသားထားပါတယ်။နယ်သာလန်သားဟာ သူ့ရဲ့လက်ထောက်နည်းပြနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မက္ကလာရင်( မန်ယူနည်းပြဟောင်း )၊ ဗန်ဒါဂက်( အေဂျက်ဇ်လက်ထောက်နည်းပြဟောင်း )တို့နဲ့အတူ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းပိုင်းတင်းကြပ်သွားဖို့ရှိနေပါ တယ်။
AMSTERDAM, NETHERLANDS – MARCH 14: Head Coach / Manager of Ajax, Erik ten Hag (L) and Dusan Tadic are pictured at the training session of AFC Ajax at Sportpark De Toekomst near Johan Cruyff Arena on March 14, 2022 in Amsterdam, Netherlands. Ajax will face SL Benfica in the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match on March 15, 2022. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
မနျယူနညျးပွသဈတနျးဟတျဟာ ကစားသမားတှဆေီကနေ သူ ဘာတှမြှေျောလငျ့ထားတယျ၊ သူ လိုခငျြတဲ့အသငျးပုံစံနဲ့ အနာဂတျရညျမှနျးခကျြတှကေို အီးမေးလျပို့ပွီး အသိပေးလိုကျတယျလို့ The Sun သတငျးစာက ဖျေါပွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အဂေကျြဇျနညျးပွဟောငျးဟာ
ဖာဂူဆနျထှကျခှာသှားပွီးနောကျပိုငျး မှနျကနျမှုမရှိတော့တဲ့အသငျးယဉျကြေးမှုကို ပွောငျးလဲခငျြနတောပါ။ “ ဘောလုံးဆိုတာ အသငျးလိုကျကစားနညျးဖွဈကွောငျး၊ ဘယျသူကမှ တဈခွားသူတှထေကျ ပိုအရေးမကွီးကွောငျးကို နညျးပွသဈက
ပထမအသငျးသားတှဆေီ အီးမေးလျပို့ခဲ့ပါတယျ။ မနျယူဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကွယျပှငျ့တှေ ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ သူ့ရဲ့အာရုံစိုကျမှုကတော့ တဈသငျးလုံးအပျေါမှာပါ။လကေ့ငျြ့ရေးတိုငျး ပှဲတဈပှဲလိုဖွဈအောငျ ကစားသမားတှကေို ပွငျးပွငျးထနျထနျလုပျစခေငျြနတေယျ။ ကစားသမားတှဟော သူတို့ရဲ့ဘဝမှာ အကောငျးဆုံးကွံ့ခိုငျမှုအဆငျ့ကို ရစလေိမျ့မယျလို့လညျး ပွောထားတယျ။
ဒီလိုမှမဟုတျရငျတော့ သူတို့ တံခါးအပွငျရောကျသှားလိမျ့မယျ။ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ သူတို့ကွိုးစားကွရလိမျ့မယျ။တကယျလို့ မလုပျနိုငျရငျ တနျးဟတျဟာ အလားအလာရှိတဲ့လူငယျတှနေဲ့ အစားထိုးလိမျ့မယျ ” လို့ မနျယူနဲ့နီးစပျတဲ့အသိုငျးအဝနျးက ပွောဆိုထားကွောငျး
The Sun က ရေးသားထားပါတယျ။နယျသာလနျသားဟာ သူ့ရဲ့လကျထောကျနညျးပွနှဈဦးဖွဈတဲ့ မက်ကလာရငျ( မနျယူနညျးပွဟောငျး )၊ ဗနျဒါဂကျ( အဂေကျြဇျလကျထောကျနညျးပွဟောငျး )တို့နဲ့အတူ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကို ရောကျလာခဲ့တာဖွဈပွီး စညျးကမျးပိုငျးတငျးကွပျသှားဖို့ရှိနပေါ တယျ။